လူမှုမီဒီယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ | Martech Zone
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 20, 2018 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 21, 2018 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာသည်ဖောက်သည်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြားခံအဖြစ်မယုံနိုင်စရာကတိတစ်ခုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအမြောက်အများသည်ချက်ချင်းပေါ်ပေါက်လာသော်လည်းအမြတ်အစွန်း (သို့) တိုက်ရိုက် ၀ င်ငွေများမပြီးဆုံးသောကြောင့် ROI သည်ခက်ခဲသည်။
သင်၏လူမှုရေးအစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်မသတ်မှတ်မီလူမှုရေးတွင် ROI ကိုအမှန်တကယ်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ လူမှုရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှု (သို့) လူမှုဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပါဝင်ပါသလား။ Salesforce မှ Altimeter နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် ဒီအလွန်ခေါင်းစဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေရန်, ဆိုရှယ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ ROI ။
သုတေသန၏တွေ့ရှိချက်များအရဆိုရှယ်မီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထိရောက်မှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုနှစ်ခုလုံးဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအဖြစ်အပျက်များအားအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ရန်အတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်သင်၏လူမှုမီဒီယာများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စီမံထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသေချာစေရန်ရင့်ကျက်မှုလိုအပ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ ROI ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကတိုင်းတာသည် အသားတင်ကမကထရမှတ်ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူနှစ်ဆ။
သူတို့ရဲ့ infographic ထွက်စစ်ဆေး လူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ ROIလူမှုရေးဆိုင်ရာ ROI ကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးသလဲ၊
LinkedIn အပေါ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော B2B ရလဒ်များကိုမည်သို့မောင်းနှင်သနည်း
ကြယ်တာရာ: သင်၏လူမှုရေးကြော်ငြာစွမ်းဆောင်ရည်ကို Benchmark
ဇန်နဝါရီ 26, 2012 မှာ 10: 30 AM
လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာများနှင့်ပန်းတိုင်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်မတူညီပါ။ အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးများပြုလုပ်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်း၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးသည်။
26:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 42
လုံးဝသဘောတူသည် @nickstamoulis: disqus! ထိုအခါငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါတို့တစ်ပြားမှဖြောင့်မတ်ဖို့ ROI အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်မလိုအပ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာဒေါ်လာတွေမိုးရွာတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲမင်းရဲ့နာမည်ကိုထွက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ!
ဇန်နဝါရီ 29, 2012 မှာ 5: 53 AM
wow၊ ဒီအချက်အလက်တွေကအရမ်းအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!